FIFA oo shaacisay xiddigaha ku tartami doona abaal-marinta goolka sanadka ee Puskas Award… (Messi oo ka soo muuqday xilli laga waayey Mo Salah iyo CR7) – Gool FM
(World)19 Agoosto 2019. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa shaaciyey xiddigaha ku tartami doona abaal-marinta goolka sanadka ee Puskas Award iyadoo Lionel Messi uu ka soo muuqday, halka laga waayey Cristiano Ronaldo iyo Mohamed Salah.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi waxa uu rajaynayaa inuu ku guuleysto abaal-marinnada tirade yar ee uusan weligiis ku guuleysan kaddib markii todobo jeer ka mid noqday xiddigaha u sharraxan abaal-marinta goolka sanadka ee FIFA Puskas Award.
Xiddiga xulka qaranka Argentina ee Leo Messi waxa uu haatan ka mid yahay 10 ciyaaryahan ee ku tartami doona abaal-marinta goolka sanadka ee FIFA sanadkan 2019.
Weerryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo iyo dhaliyaha ku guuleystay sanadkii hore abaal-marintan ee Mohamed Salah kaasoo weerarka uga dheela Liverpool ayaa liiskan laga waayey.
Lionel Messi ayaa tiro rikoor ah oo dhan tobobo jeer ku tartamay abaal-marinta FIFA Puskas Award tan iyo markii bixinteeda la bilaabay sanadkii 2009-kii, balse waxaa xusid mudan in hal mar oo qura uu ka galay kaalinta labaad waana sanadkii 2015-kii.
Ciyaaryahyankan 32-sano jirka ah ee Lionel Messi ayaa sanadkaan waxa uu ka mid yahay xiddigaha ku tartami doona ee ah musharaxiinta, waxaana uu gool qurux badan ka dhaliyey bishii Maarso kooxda Real Betis.
Liiska musharraxiinta goolka sanadka waxaa xiddiga ugu guuldhalinta badan La Liga kula tartamaya Zlatan Ibrahimovic oo gool cirib uu wareejiyey u dhaliyey kooxdiisa LA Galaxy kulan ay la ciyaareen Toronto.
Xiddiga reer Sweden ayaa abaal-marintan ku abaal-marintaan ku guuleystay sanadkii 2013-kii, waxaana ay tani tahay markii afaraad oo uu Ibrahimovic u tartamo abaal-marinta goolka sanadka ee FIFA.
Yeelkeede, Andros Townsend ayaa ah xiddiga kaliya ee horyaalka Premier League u matalaya tartanka abaal-marintan kaddib goolkii gantaalka ahaa ee uu xilli ciyaareedkii hore u dhaliyay Crystal Palace kana dhaliyay kooxda horyaalka Ingiriiska xafidanaysa ee Manchester City.
Codeynta ayaa ka socota website-ka rasmiga ah ee FIFA, waxaana ay ku eg tahay 01 bisha September ee sanadkan 2019, waxaana xusid mudan in codadka ay dhiibtaan taageerayaasha kubadda cagta ay soo xuli doonaan saddex goo lee ugu fiicnaa, markaas kaddibna goolka sanadka waxaa sii dooran doona khubaro uu soo xulay xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 10-ka ciyaaryahan ee u sharraxan goolka sanadka ee FIFA Puskas Award & Kulammada laga dhaliyey goolashaas:-
“Ronaldo lama mid ahan Beckham, sababtoo ah maalintii oo dhan wuxuu ku qaadan jiray…”